अमेरिकी अधिकारीहरुले लुकाउन खोजेको त्यो महामारी | पहिलो बोली
अमेरिकी अधिकारीहरुले लुकाउन खोजेको त्यो महामारी
४६७५ पटक पढिएको
मार्च ६, १९०० मा ४१ वर्षिय चिनि–अमेरिकी कामदार चिक जिनको शरिर सेन फ्रान्सिस्को चाईनाटाउनस्थित एक होटलको बेसमेन्टमा भेटिएको थियो । मृत्युको प्रमाणपत्र लेखिरहँदा एक डाक्टरले शवमा अच्चम लाग्ने धुलो किसिमको पदार्थ (नोडुलस) पाएका थिए । ल्याबमा गरिएका परिक्षणमा मृत्युको कारण डरलाग्दो बुबोनिक प्लेग रहेको पाईयो । अमेरिकामा पुष्टि भएको पहिलो केस यहि थियो । पष्टि भएसँगै शहरमा भर्खर बनेको स्वास्थ्य विभागले चाईनाटाईनमा पूर्ण क्वारेन्टाईनमा राख्यो ।
आगामी दुई वर्षसम्मको समय प्लेगको अस्तित्व नमान्ने क्यालिफोनिर्याका आधिकारिक व्यक्ति र बढिरहेको महामारीलाई रोक्न लडिरहेका वैज्ञानिकहरु बिचको अपत्यारिलो संघर्ष चलेको थियो । परिणाम स्वरुण राष्ट्रव्यापी रुपमा राष्ट्रपति र झण्डै दुई दर्जन गर्भनरको बिच विवाद भयो, जसले क्यालिफोर्नियाका गर्भनर पदच्युत गरियो । त्यत्तिञ्जेल एक अग्रणी वज्ञानिकको कुरा पनि मानिएको थिएन, र यो भयानक रोगबाट हजारौंको संख्यामा मृत्यु भईसकेको छ ।
‘एउटा मारामारीले सर्वव्यापी डर पैदा गर्न सक्छ, र आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भिर असर गर्न सक्थ्यो । व्यपारिक पक्षलाई मध्य नजर गर्दा रोगको सत्यतालाई नकारिने आशंका थियो,’ यो घटनालाई अध्ययन गरेका मिचिगन विश्वविद्यालयका स्व. पिलिप कालिस्च लेख्छन् ।
अमेरिकामा ब्ल्याक डेथ
मध्ययुगिन समयमा ब्ल्याक डेथ भनिएको कुरा एसियाभरि फैलिएको थियो । लाखौं करिसकेका थिए र संयुक्त राज्यका सार्वजनिक स्वस्थ्य अधिकारिहरु यसले प्यासिफिकबाट दक्षिणी तटका बन्दरगाहसम्म आईपुग्न सक्छ भन्नेमा लामो समय देखि डराएको थिए । प्रायः मुसाहरुको प्रजातीबाट फैलिएको यो खतरनाक संक्रामण रोगले मुखयतः घातक थियो ।
जीनको शरिर भेटिएको दुई दिन पछि सेन फ्रान्सिस्को क्रोनिकलमा पहिलो पृष्ठमा ‘प्लेगको डर लुटनको निम्ति रचिएको नक्कली कथाको अंश हो’ शिर्षकमा समाचार छापियो । स्थानिय व्यवसायीहरु प्लेग फैलिएको खबरले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर गर्नेमा डराएका थिए, जसकारण स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको दाबीमाथि उनीहरुले विवाद गरे । जसले गर्दा भोलीपल्ट शहरमा लगाईएको क्वारेन्टाईन हटाईयो । पत्रिकाले यो निर्णयलाई ‘व्यवसायमा भएको गहिरो चोट’ भन्दै समाचार छाप्यो ।
त्यहि बेला अर्को स्थानिय प्रकाशन बुलेटिनले प्लेग कुनै पनि रुपमा ‘हामीलाई थाहा भएका दादुरा, मम्स, वा अन्य कुनै साधारण रोग’भन्दा कम जोखिमपूर्ण भएको समाचार छाप्यो । पत्रिकाले प्लेग फैलिएको समाचारले बन्दरगाहबाट पर्यटक र काग्रो दुवैको व्यवस्थापनबाट ध्यान विकेद्रिन्त गराएको कुरा छापेको थियो ।
मार्च ११ मा जोसेप किनयौन नामका स्यानिय अधिकारीले जीन प्लेगको कारण मरेको पुष्टि गरे । किनयौनले बन्दरगाहको समुन्द्री स्वास्थ्य सेवाको संघिय कार्यलय, जहाँबाट देशको बन्दरगाह हुँदै भित्रन सक्ने रोगको डरलाई व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यसको नेतृत्व गरे । एक सम्माननिय चिकित्सकको रुपमा उलने संयुक्त राज्यको हाईजिनिक ल्याब्रोटरीको स्थापना गरे, जुन पछि स्वास्थ्यको राष्ट्रिय संस्थान बन्यो ।
प्लेगको कारण मृत्यु बढ्दै गयो । मे महिनामा किनयुनले सर्जन जेनेरललाई रोगले महामारीको रुप लिएको खबर दिएका थिए । ‘मैले यो विषय राष्ट्रपतिको ध्यानसम्म पुर्याउन अनुरोध गर्नुपर्छ,’ आफ्ना सुपरभाईजर अर्थ सचिबलाई सर्जनले २१ मे मा लेखेका थिए । राष्ट्रपतिलाई रोक्न आवश्यक पर्ने निति नियमलाई स्विकृति दिन उनले अनुरोध गरेका थिए । (१८ वर्षपछि फ्लुको महामारीमा कतिपय शहरहरुले नियन्त्तण पनि यसरी नै गरेका थिए ।)
राष्ट्रपति विलियम म्याककिन्लेले त्यो दिन अनुरोध स्विकारे । तर, संघिय सरकारले क्यालिफोर्नियाका रिपब्लिकन गर्भनर हेन्री गगे, र राज्यको शक्तीशाक्ती व्यापारिक समुदायलाई रिच उठाउने आशंकमा यी कदम कार्यन्वयन गर्न हिचकिचाएको थियो । संघिय सरकारका कदमहरु चाइना टाउनमा सशस्त्र पेट्रोलिङ्ग गरेर चिनियाहरुलाई शहर भित्र र बाहिर गर्न बन्देज लगाउँदै पुनः क्वारेन्टाईन लगाउनमा मात्रै सिमित भयो ।
सेन फ्रान्सिस्कोका अधिकारीहरुले कुनै महामारी नभएको र देखिएका केही मात्रै केसहरुलाई आईसाल गरेको दाबी गरिरहेका थिए । र चिनियाँ समुदायले आफ्ना नेताहरुले गरेको क्रुर विभेदको विरोध गरिरहेका थिए । अदातलले चिनियाँ व्यवसायी संघका अनुसार क्वारेन्टाईन वैज्ञानिक नभएर सम्प्रदाय अनुसार विभेदपूर्ण भएको कुरालाई आधार मानि जुन १५ बाट क्वारेन्टाइन हटाउने आदेश जारी गर्यो । व्यायदिसले प्लेगको अस्तित्व छ भन्ने कुरामा अपर्याप्त प्रमाण भएको समेत भनेका थिए । प्यासिफिक मेडिकल जर्नलले समेत प्लेगमाथि भएका परिक्षणहरु असत्य भएको भन्दै महामारी भएको कुरालाई नकारेको थियो ।
सेयरको मुल्य धेरै थियो । अन्य राज्यहरुले क्यालिफोर्नियासँगको व्यापारलाई रोक्ने निधो गरिरहेका थिए, र पर्यटन पनि सुस्त थियो । क्रोनिकल जस्ता अखबारहरुले निरन्तर प्लेग भएको दाबीलाइृ शहरको अर्थतन्त्र गिराउन गरिएको गोप्य प्रयास भएको बताईरहेका थिए ।
किनयौन आफूसँग भएका सत्यतथ्य प्रमाणका बावजुद पनि नेसेयर्सहरुको मुख्य तारो भएका थिए । युरोपमा उनले प्लेगका विशेषज्ञहरुसँग अध्ययन गरेका थिए, जसमध्ये एकले रोग लगाउने बासिल्लसलाई पत्ता लगाएका थिए । किनयौनले प्लेगको सम्भावित आगमनलाई मध्यनजर गर्दै क्यालिफोनियालाई सुरक्षित राख्न सक्ने पदमा खटाईएको थियो । जब उनले आफ्नो तथ्यांकलाई भुटो बताउन दिईएको घुस लिन अस्विकार गरे, उनलाई पत्रपत्रिकामा भष्ट्रचारी र असक्षम भन्दै अमानविय निर्दयी रुपमा हमला गरियो । कतिसम्म भने उनलाई जिनको शबमा बासिल्लसलाई हालेको भन्न आरोप पनि लगाईयो ।
डा. जोसेप किनयौन Source: Wikipedia
किनयौनले निरन्तर सर्जन जनरललाई महामारीको बारेमा रिर्पोट गरिरहेका थिए । अक्टोबरमा उनले अन्य तीन जनामा प्लेग देखिएको बताएका थिए । ‘सबै केस मृत्युमा सकिएको छ,’ उनले लेखे, ‘संक्रमण्को क्षेत्र दिनानुदिन बढिरहेको छ ।’
आगामी जनबरीमा गर्भनर गगेले सार्वजनिक रुपमा ‘प्लेगको झुट फैलाउने’ भन्दै किनयौनलाई सजाय सुनाए । उनले किनयौनमाथि पोस्टमार्टममा आयातित प्लेज ‘बासिल्ली’ भ्याक्सिनेसन गरेर शरिरमा राखेको बताएका थिए । उनले यस्तो अपराध गर्नेलाई आजिवन कारावासको सजाय हुने बताएका थिए । केही समयपछि राज्यका अधिकारीहरुले किनयौनलाई पक्राउ गरेका थिए ।
अन्य राज्यको चिन्ता
त्यहि महिना अर्थ सचिबले प्लेगको सत्यता थाहा पाउन गठन गरेको समितिले गगेलाई राष्ट्रपति म्याककिन्लेलाई समिति गठन गरिनु क्यालिफोर्निया राज्यको बेईजत्ती भन्ने रिसाहा पत्र पत्रचार गर्न प्रोत्साहन गरेको थियो । राष्ट्रपतिलाई गगे बिचलित हुने डर थियो । त्यसैले अर्थ सचिबले समितिको नतिजालाई गोप्य राखिने बताएका थिए । यसको बदलापमा गगेलाई चाइनाटाउनको सरसफाईका क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।
समितिले प्लेगका अन्य छ वटा केस भेट्टाएको थियो । तर, समुन्दी स्वास्य सेवालाई वासिङ्टनले प्लेग भनेर उल्लेख नगर्न आदेश थिएको थियो । किनयौनलाई अपमानजनक ढंगमा डेटरोइट पठाईयो ।
‘डा. किनयौनको गल्ती उनले सत्यता बोल्नु र यसलाई दबाउनमा सक्रियता नदेआउनु मात्रै थियो,’ अमेरिकन मेडिकल गठबन्धनको जर्नलले सम्पादकिय लेखेको थियो । गर्भनर गगेले भने उनको कार्यलयमा प्लेजका नयाँ केसहरुको जानकारी आएतापनि आफ्नो राज्यमा कुनै प्लेगको अस्तित्वको नकारिरहे । प्राप्त जानकारीहरुलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन् ।
वाइट हाउसले क्यालिफोर्नियामाथि दबाब सिर्जना गर्न अस्विकार गरिरह्यो । तर, अन्य गर्भनरहरुले प्लेजको बारेमा थाहा पाईसकेका थिए, र देशव्यापी फैलिरहेको महामारीका असरहरुको बारेमा डराईरहेका थिए । १९०३ जनवरीमा वासिङ्टन डिसीमा २० भन्दा धेरै राज्यका अधिकारीहरुको छलफल भएको थियो । उनीहरुले तुरुन्तै कुनै कदम नचालमा क्यालिफोनिर्यालाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने धम्की दिएका थिए, र गगेको आलोचना गरेका थिए । गगेले असत्य संकटको सिर्जना गरेको भन्दै किनयौन र संघिय सरकारलाई दोष लगाईरहेका थिए ।
त्यत्तिञ्जेल, जजेलाई आफ्नै क्रियाकलापले रिपब्लिकन पार्टीबाट पनि अलग्याईसकेको थियो । गर्भनर पदको दोस्रो कार्यकालको लडन समेत उसलाई अस्व्किार गरियो । मेडिकल चिकित्सक रहेका नयाँ गर्भनरले थुप्रै निर्णायक कदमहरु चालेका थिए । शहरमा भएका मुसाहरुको जनसंख्यामाथि उनले धावा बोलेका थिए । प्लेगगको महामारीमा अन्तिम केस १९०४ मा देखिएको थियो । अन्यसम्ममा १२१ केस पुष्टि भएका थिए, जसमा केवल दुई जनाले रोगबाट बच्न सफल भए ।
किनयौनको करियरको फेरि कहिल्यै प्राप्त भएन । तर, उनले स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा पहिलो श्रेणीको अनुसन्धान ल्याउन गरेका कामहरुलाई बिर्सिएका थिएनन् । सन् २०१२ को पेपरमा दुई अनसन्धाताहरुले उनलाई राष्ट्रिय स्वास्य संस्थानको जन्ममा सहयोग गर्ने ‘बिर्सिएका पुर्वज’ भनेर सम्मान दिएका थिए । पेपरका लेखकमध्ये एक एन्टोनी फाउसी हुन, जो अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कोरोना भाईरस टास्क फोर्सका एक अग्रणी सदस्य छन् ।
–नेसनल जियोग्राफिक डटकममा छापिएको सामग्रीको नेपाली भावानुवाद